संविधानको रक्षा गर्दै अघि बढौँः अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर रहन सबैमा आग्रह गरेका छन् । सातौँ संविधान दिवसको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले संविधानको रक्षा गर्दै यसले निर्दिष्ट गरेको दिशामा अघि बढ्न अग्रसर रहन आग्रह गरेका हुन् ।
करिश्मालाई ओलीको फोनः परीक्षा कस्तो भइरहेको छ ?
काठमाडौं । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले अहिले कक्षा १२ को परीक्षा दिइरहेकी छन् । परीक्षाको व्यस्तताले उनी सितिमिति फोन उठाउँदिनन् ।
'चुनावसम्म धैर्य गरेर पार्टीका काममा खट्नुहाेस्'
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) सरकारमा हुँदा विकास निर्माणका गतिविधि तिब्रगतिमा अगाडि बढेको दाबी गरेका छन् । नेकपा (एमाले) रुपन्देहीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासका कामहरू अगाडि बढाउन एमाले पार्टी नै चाहिने दाबी गरे ।
ओलीको प्रश्नः एमालेमाथि बन्चरो हान्नेलाई कामरेड भन्छन् ?
काठमाडौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ‘कामरेड’ भन्न नसकिने बताएका छन् । आयोजित कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै ओलीले नेपालको आलोचना गर्दै उनलाई कामरेड भन्न नसकिने बताएका हुन् ।
ओलीले आज बुटवलमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज बुटवलमा हुने एक कार्यक्रममा कार्यकर्ताहरुलाई सम्बोधन गर्दैछन् । रुपन्देहीका एमाले अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई उनले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
‘माधव नेपालले नयाँ पार्टी बनाएको होइन, तमासा मात्र गरेको हो’
झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तमासा गरेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपालले तमास गरेको आरोप लगाए ।
ओली गृहजिल्ला झापा जाँदै
झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज गृहजिल्ला झापा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि एमाले अध्यक्ष पहिलो पटक गृहजिल्ला झापा जान लागेका हुन् ।
ओलीले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा आज हेर्न नभ्याइनेमा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयनको माग गर्दै दायर गरेको रिट आज हेर्न नभ्याइने भएको छ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा परेको रिट आज हेर्न नभ्याइने भएको हो ।
काठमाडौं । संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नजाने भएका छन् ।
फतिमालाई ओलीको जवाफः एमसीसीबारे तत्काल धारणा बनाउँदैनौं
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)बारे तत्काल धारणा नबनाउने बताएका छन् । बिहीबार ओली निवास बालकोटमा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसहितको भेटमा ओलीले सो जवाफ दिएका हुन् ।